I-Architecture ne-Design for the Client Blind
Ubuciko bokubukwa Okuyisisekelo
Ukuklama for Blind
Ukulungiswa kwe-Retro Kusho Imiklamo Engalungile
Sonke siyimpumputhe ngaphandle kokukhanya. Lokho kungumzimba nje kuphela wethu. Ngakho-ke akufanele kusimangaze ukuthi abadwebi bangakwazi ukugxila ekukhanyeni ezindaweni abaziklamayo. I-Architecture iyimidwebo ebonakalayo, ngakho-ke kwenzekani lapho umakhi ehamba ephuphuthekile?
"Izakhiwo ezinkulu ezimpumputhe nabangaboni kahle zifana nanoma imuphi omunye umklamo omkhulu, kungcono kakhulu," kusho umdwebi waseSan Francisco uChris Downey, i-AIA.
"Ibukeka futhi isebenza okufanayo ngenkathi inikeza ukubandakanyeka okucebile nokubheke kwazo zonke izinzwa." U-Downey wayengumakhi wezakhi lapho isifo sobuchopho sabonakala ngo-2008. Ngolwazi oluzimele, wakhetha i-Architecture for the blind and became consultant for other designers.
Ngokufanayo, lapho umklami uJaime Silva elahlekelwa amehlo akhe e-congenital glaucoma, wathola umbono ojulile wendlela yokuklama abakhubazekile. Namuhla isakhiwo se-Philippine-based sibheke nabanjiniyela nabanye abakhi ukuphatha amaphrojekthi futhi bakhuthaze ukuklama jikelele .
Ingabe i-Universal Design for the Blind?
I-design yemvelo iyisikhathi esithi "esikhulu," ehlanganisa izindlela eziningi ezijwayelekile ezifana nokufinyeleleka nokuklanywa "okungavinjelwe". Uma umklamo wendawo yonke-okusho ukuklama wonke umuntu - kungukuthi, ngencazelo, kufinyeleleka. Esikhathini esakhiwe, ukufinyeleleka kusho izikhala eziklanyelwe ezihlangabezana nezidingo zabantu abanamakhono amaningi, kuhlanganise nalabo abayizimpumputhe noma abanombono olinganiselwe kanye nezinkinga eziphathelene nokuqonda.
Uma umgomo ukuklama yonke indawo, wonke umuntu uzohlala.
A Continuum Amakhono
Umbono osebenzayo uhlanganisa izindawo ezimbili: (1) ubuciko obubukwayo, noma ikhono lokubona imininingwane efana nezici zobuso noma izimpawu ze-alphanumeric; kanye (2) nendawo ebonakalayo, noma amandla okukhomba izinto eziphathelene nombono wakho wangaphakathi noma ozungezile.
Ngaphezu kwalokho, ukuqonda okujulile nokuqhathanisa ukuzwela kungaba nezinkinga zombono ezihambisanayo.
Amakhono okubuka ahluka kakhulu. Ukukhubazeka kombono kuyisibambiso -sonke isikhathi esihlanganisa abantu abanalutho olubonakalayo olungenakulungiswa ngokugqoka izibuko zamalensi okuxhumana. Ukukhubazeka okubonakalayo kunokuqhubeka kwezikhomba eziqondene nemithetho yezwe lakho. Emibonweni ephansi yase-United States futhi kancane kancane ibona imigomo ejwayelekile yokuqhubeka kokusebenza okungashintsha ngesonto kuya kwesonto noma ngisho nehora kuya kuhora; Iphuphuthekile ngokomthetho e-US ngenkathi kuqondiswa umbono oyinhloko ungaphansi kuka-20/200 iso elingcono futhi / noma umkhakha wombono ulinganiselwe kuma-degree angama-20 noma ngaphansi; futhi impumputhe ngokuphelele ngokuvamile ukuhluleka ukusebenzisa ukukhanya kepha kungenzeka noma angaboni ukukhanya.
Imibala, Ukukhanyisa, Imidwebo, Ukushisa, Umsindo, Nokulinganisela
Yini abantu abayizimpumputhe abazibona ? Abantu abaningi abayimpumputhe ngokomthetho ngempela banombono othile. Imibala ekhanyayo, ukuguqulwa kwamadonga, nezinguquko ekukhanyeni kungasiza abantu abanombono olinganiselwe. Ukufaka ama-entryways namastibhu kuwo wonke umklamo wezakhiwo kusiza amehlo afanelane nezinguquko zokukhanyisa. Amazwi acacile, kufaka phakathi izakhiwo ezahlukene zomgwaqo nezindlela zomgwaqo kanye nezinguquko ekushiseni nasekuzweni umsindo, anganikeza izimpawu zomhlaba kubantu abangakwazi ukubona.
I- façade ehlukile ingasiza ukuhlukanisa indawo yendlu ngaphandle kokubala nokugcina ithrekhi.
Umsindo ngumyalo obalulekile kubantu abangenayo imibono ebonakalayo. Ubuchwepheshe bungakhiwa ngaphakathi kwezindonga zendlu njengokwakhelwe kumafoni ahlakaniphile - konke okumele ukwenze ukubuza umbuzo, futhi umsizi womuntu siqu ohlakaniphile angakwazi ukuqondisa umhlalaphansi. Izimo zendlu ehlakaniphile zizosiza kakhulu abantu abakhubazekile.
Eminye imininingwane yomzimba kufanele ibe yinto evamile kuwo wonke umklamo wendawo yonke. Izikhwama zokulinganisa kumele zifakwe ekwakhiweni kwezakhiwo .
Futhi yilokho into - abakhiqizi kumele bahlanganise imininingwane kumklamo futhi bangazami ukuphindaphinda ukulinganiselwa komunye umuntu. Njengawo wonke amacebo afinyelelekayo afanelekayo, yonke indawo iqala ngomklamo . Ukuklama izimpumputhe engqondweni kubandakanya ukunyakaza ekudalweni kwendawo yonke.
Ukuxhumana nokwethulwa ngamakhono abalulekile womakhi. Abakhi bezakhiwo ababonakala bengaboni kahle kumele babe nokudala ngokwengeziwe ekufinyeleleni imibono yabo. Amakhompiyutha abe yi-equalizer enkulu yamachwephesha abakhubazekile nganoma yiluphi uhlobo, nakuba amathoyizi athile afana ne-Wikki Stix asetshenziswe abantu beminyaka yonke.
Abaqambi abangaboni kahle bazosiza kunoma iyiphi inhlangano noma umuntu ofisa ukugxila ekuhlanganiseni. Ngaphandle kokubandlulula ngendlela izinto ezibukeka ngayo - ngezinye izikhathi ezibizwa ngokuthi i- aesthetics - umakhi oyimpumputhe uzokhetha imininingwane esebenzayo noma impahla kuqala. Indlela ebukeka ngayo? Okubizwa ngokuthi "i-eye candy" kungafika kamuva.
Ekugcineni, uHlelo LokuBheka Okungeyona Ephansi lweNational Institute of Building Sciences (NIBS) selungule imihlahlandlela yokuklama izindawo zokuhlala kanye nezincomo zokuhlala endaweni yomphakathi. Imiqulu yabo ye-PDF yocwaningo olususelwe kumakhasi angu-80 olwakhelwe emadokhumenti yokuDalwa kwemvelo ye-Visual Environment ikhishwe ngoMeyi 2015 futhi igcwele ulwazi oluwusizo.
> Ukuhambela, Chris Downey Architecture for the Blind, http://www.arch4blind.com/profile.html [okutholakala ngoNovemba 6, 2017]
> Chris Downey: Yakha ngezingqondo ezimpumputhe, TED Talk, Okthoba 2013 [kufinyelelwe kuMeyi 25, 2014]
> Umdwebi ubonisana nezimpumputhe nguJan Goben, AFriendlyHouse.com, Meyi 16, 2011 [kufinyelelwe ngoNovemba 6, 2017]
> Umklamo Ngaphakathi Kokufinyelela KuDouglas McGray, I-Atlantic , Okthoba 2010 [kufinyelelwe ngoNovemba 6, 2017]
> Izincazelo eziyinhloko zeMigomo yeSatatisti, i-American Foundation ye-Blind, [ifinyelelwe ku-Agasti 20, 2016]
Inqubo ye-Anime Dubbing
Amabhuku Aphezulu Ezingu-9 Ezinyathelweni Zendlu
B Gata H Kei: Ukubuyekezwa Kwesikhathi Sokuqala (Uchungechunge) lwe-Yamada
Yiba Umklami Wokwakha Wengcweti
Ngingumusha ku-Anime. Ngiqalaphi?
Ukwenza Ukuphila eMangeleni: Ingxenye 3
Iyini ikholomu kaSolomoni?
Uma ngifunda izakhiwo zokwakha, yiziphi izifundo zekolishi?
Hlanganisa i-DVD - Thola wonke ama-DVD we-Trigun Lapha
4 Izinyathelo Zokuphila Ezakhiweni
Iziqalo Zokuqala Zemihla YamaJapane
Ukholo Lungenakugwenywa: Ukholo Awuwona Umthombo Wokwazi
I-Diglossia in Sociolinguistics
Abakwa-US Abangaphandle Abafufusa Abagijimi Bamaphesenti Abangu-11 Million
Yini Okumele Yibandakanye Kit Yakho Emergency Kit
Schenck v e-United States
Incazelo yama-Majime ngesiJapane
Imibuzo engaqondile ye-ESL
10 Amathekisthi Amathekisthi Ayovutha Ingqondo Yakho
UJobe Ukwabelana Ngothisha
Funda Ngezinhlobo ezintathu Zamabhizinisi Wezobuciko Namakhono
Amaphuzu Ayishumi Amakhulu Ase-Wyclef Jean
Izinambuzane Eziningi Ezivamile Zesihlahla sase-US
Imigomo Yenkambo Yegalofu
Umnotho wezoMnotho waseMelika
Imigomo Yomculo YaseFrance
Izingoma eziphezulu ze-Pop neDwala kusukela ngo-1984
1966 US Open: Isibopho Esidumile, i-Infamous Collapse
I-WrestleMania - Ama-Random Wrestler Amaqiniso, amarekhodi, kanye nezibalo
Amathiphu okuthi ungayigcina kanjani i-Paint yamafutha futhi ugcine usebenza kahle
U-Tom Cruise Ukhuluma Ngokuthi "I-Samurai Yokugcina"
Intro to the Heraldry - A Primer for Genealogists
Indlela Yokudweba iBatman the DC Way ngo-1982
Kungani I-Glue Inganamatheli Ngaphakathi Ngethamo?
Uyini Umehluko Phakathi Kwe-Steam Ne-smoke?